Comores neMozambique vachida rubatsiro zvakanyanya mushure merufu rweDutu reKenneth
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Comores neMozambique vachida rubatsiro zvakanyanya mushure merufu rweDutu reKenneth
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Comoros Breaking Nhau • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • Mozambique Breaking News • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Dutu guru Kenneth raparadza Mozambique neIndian Ocean Island Country Comoros nhasi. Vashanyi vakahwanda kuComores airport neIbo Fort kuMozambique. Zviuru zvakasara zvisina pekugara.
Pachitsuwa chevashanyi cheIbo muMozambiki, 90 muzana yemisha yevagari vevanhu zviuru zvitanhatu yakapetwa. "Handitarisiri kuwana hotera yangu isina kukuvara," akadaro muridzi wehotera yeSwitzerland, Lucie Amr, akapotera munhare yeIbo pamwe chete nevagari vemo.
Vanhu veMozambique vari kubhadhara mutengo wekushanduka kwemamiriro ekunze ane njodzi asi ivo vakaita pasina kana chinhu chinokonzera dambudziko iri. Mvura inodziya & kukwira kwenzvimbo dzegungwa ndicho chikonzero cheIndia Ocean madutu, kusvika parinhasi hapana rekodhi yemadutu maviri ekurovera kwakadai Mozambiki mumwaka mumwe chete
Chikamu chechitatu Cyclone Kenneth yakawira pasi mukati Mozambiki seboka rechina dutu rinotakura mhepo dzemakiromita 4 paawa. Yakarova matunhu ekuchamhembe kwedunhu reCabo Delgado mukupera kweChina mushure mekutsvaira zviwi zveComoros. Ndiyo yakasimba kwazvo kudonha tropical cyclone yakamboonekwa ku mainland southeast Africa.
150 000 vanhu mukati Comores vari kuda rubatsiro rwevanhu zvakanyanya. 67,800 vana (0-17 makore) uye vakadzi 41,800. Kufungidzira kwekutanga kunoratidza vanhu vanopfuura zana vakakuvara. Mumwe muverengi kubva kuComores akatumira eTN: Handisati ndamboona chero nyika ichibatsira maComoros. Tinogona kungozvivimba pachedu. Varikupi vabatsiri vedu? Rashiya? Saudhi Arabhiya?
Nhamba dzekupedzisira mu Mozambiki vangangoita vatatu vakafa uye nhamba iyi ingangokwira. 3 vanhu vakanganiswa, vangangoita mazana matatu nemazana mashanu ekukuvara kwemisha uye zvipatara zvitatu zvakaparadzwa.
Comores inoshuma vatatu vakafa, zana vakakuvara, zviuru makumi maviri zvevanhu vakasara vasina pekugara.
Komorosi, zviri pamutemo Union yeComoros, inyika yechitsuwa iri muIndian Ocean iri kumucheto kuchamhembe kweMozambique Channel kubva kumahombekombe ekumabvazuva kweAfrica pakati kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweMozambique, dunhu reFrance reMayotte, uye kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweMadagascar. Guta guru uye rakakura guta muComoros ndiMoroni. Chitendero cheruzhinji rwevanhu chiSunni Islam. Pa 1,660 km2, kusasanganisa chitsuwa chakakwikwidzwa cheMayotte, Comoros ndiyo yechina-nyika diki diki dzeAfrica nenharaunda. Comores chikamu che Vanilla Island Yekushanya Sangano.
Mozambique isa yekumaodzanyemba kweAfrica nyika inotaura chiPortugal ine mahombekombe egungwa marefu eIndia ane mahombekombe akakurumbira seTofo, pamwe nemapaki emahombekombe egungwa. MuQuirimbas Archipelago, makiromita mazana maviri nemazana mashanu emakorari zvitsuwa, mangrove-akafukidzwa Ibo Island ane matongo-enguva yekoloni anopona kubva panguva yekutonga kwePutukezi. Iyo Bazaruto Archipelago iri kumaodzanyemba ine ma reef ayo anochengetedza husingawanzo hupenyu hwegungwa kusanganisira dugongs.
The African Tourism Bhodhi hutungamiri huri kudaidzira Africa nepasi rose kuti vabatane shure Mozambique neComores. Vanilla Island Tourism inhengo yeAfrican Tourism Board, ndizvo zvakaitawo Ministry of Tourism yeMozambique.
African Tourism Board yakaratidza zvipo zvemuno zviripo kunze kweRed Cross neUNICEF. Mamwe mashoko tinya pano